လာမည့်နွေရာသီတွင် ဝင်းဂါးနေရာ အစားထိုးရန် နည်းပြသစ်တစ်ဦးကို အာဆင်နယ် ရှာဖွေနေ - Yangon Media Group
လာမည့်နွေရာသီတွင် ဝင်းဂါးနေရာ အစားထိုးရန် နည်းပြသစ်တစ်ဦးကို အာဆင်နယ် ရှာဖွေနေ
အာဆင်နယ်အသင်းသည် လိဂ်ဖလားဗိုလ်လုပွဲတွင် မန်စီးတီးအသင်းကို ရှုံးနိမ့်ပြီးနောက် လာမည်နွေရာသီ၌ နည်းပြအာစင်ဝင်းဂါး၏နေရာတွင် ဆက်ခံမည့်နည်းပြသစ်များကို စာရင်းပြုစုရှာ ဖွေနေသောကြောင့် အာစင်ဝင်းဂါး၏ အနာဂတ်မှာ မသေချာမရေရာဖြစ်လာခဲ့ ကြောင်းသိရသည်။
အာစင်ဝင်းဂါးသည် အာဆင်နယ်အသင်းကို ၂၂နှစ်ကြာ ကိုင်တွယ်လာခဲ့ သော်လည်း ယခုနှစ်များအတွင်း အောင် မြင်မှုနှင့်ဝေးကွာနေခဲ့ခြင်းနှင့် လိဂ်ဖလားဗိုလ်လုပွဲတွင် မန်စီးတီးအသင်းကိုဂိုးပြတ် အရေးနိမ့်ခဲ့ခြင်းတို့ကြောင့် ဖိအားပိုများလာခဲ့ပြီး လာမည့်နေရာတွင် နည်းပြရာထူးကိုပါ ဆုံးရှုံးရဖွယ်ရှိနေခြင်းဖြစ်သည်။ အာဆင်နယ်အသင်း၏ အတွင်းလူတစ်ဦး၏ပြောပြချက်အရ ယခုအာဆင်နယ်အသင်း ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်များ ပြုစုရှာဖွေလျက်ရှိသည့် ဝင်းဂါးနေရာဆက်ခံမည့် နည်းပြများစာရင်းတွင် ဂျာမနီနည်းပြဂျိုအာချင်လို၊ မိုနာကိုနည်းပြဂျာဒင်၊ ဆဲလ်တစ်နည်းပြဘရန် ဒန်ရော်ဂျာတို့နှင့်အတူ မန်စီးတီးလက် ထောက်နည်းပြအဖြစ်ဆောင်ရွက်နေသည့် အာဆင်နယ်ကစားသမားဟောင်း အာတီတာတို့လည်း ပါဝင်ကြောင်းသိရသည်။
အာဆင်နယ်အသင်းသည် ထိုသို့နည်းပြ များရှာဖွေနေသော်လည်း ရာသီအကုန်၌ တစ်ရာသီစာသုံးသပ်မှုဖြင့် အာစင်ဝင်းဂါး၏အနာဂတ်ကို ဆုံးဖြတ်သွားမည်ဖြစ်ရာ ဝင်းဂါးအနေဖြင့် ယခုရာသီအကုန်တွင် ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်ရရှိအောင် ပြန်လည်ရ ယူပေးနိုင်ပါက အာဆင်နယ်နည်းပြအဖြစ် ဆက်ရှိဖွယ်ရှိနေသည်ဟု သိရသည်။ အခြားသတင်းတစ်ရပ်တွင် အာဆင်နယ်ကွင်းလယ်လူဝီရှီးယားက လိဂ်ဖလားဗိုလ်လုပွဲတွင် မန်စီးတီးအသင်းကိုရှုံးနိမ့်ခဲ့ ခြင်းမှာ ဒိုင်လူကြီးသုံးဦး၏ဆုံးဖြတ်ချက် အမှားများကြောင့်ဖြစ်ကြောင်း စွပ်စွဲပြောဆိုလိုက်သည်။
မန်စီးတီးနှင့်ပွဲက ဒိုင်လူကြီးများ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်ပတ်သက်၍ ဝီရှီးယားက လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နာပေါ်တွင်ရေးသားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးသူက ”မန်စီးတီးအသင်းက အသင်းကောင်းတစ်သင်းဖြစ်သလို ဗိုလ်စွဲဖို့လည်းထိုက်တန်တဲ့အသင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အရှုံးအတွက် လက်ခံပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒိုင်တွေရဲ့ဆုံး ဖြတ်ချက်ကို စိတ်ပျက်မိတာအမှန်ပါပဲ။ ပေးလိုက်ရတဲ့ပထမဂိုးက ပြစ်ဒဏ်ဘောပါ။ ဒုတိယဂိုးက လူကျွံနေပါတယ်။ ဒါ့ အပြင်မန်စီးတီးက ပထမပိုင်းကတည်းက တစ်ယောက်အထုတ်ခံရသင့်တာပါ”ဟု ရေးသားစွပ်စွဲခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ယခုရာသီတွင် ရမှတ် ၁ဝဝ အထိ ရရှိရန် နာပိုလီနည်းပြ ဆာရီ မျှော်လင့်ထား
တရားမျှတသည့် ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်လာစေရန် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များ အားလုံး NCA လက်မှတ??
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း အများပြည်သူနှင့်သက်ဆိုင်သည့် နေရာများတွင် ၀ိုင်းဖွဲ့၍ အရက်သေ??
ကျူးကျော် မိသားစု တစ်သိန်းခွဲကျော်ကို အိမ်ရာ စီစဉ်ပေးနိုင်ရေး ပြည်ပ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူမျ
လုပ်သား ဖူလုံရေးငွေ အလွဲသုံးစားပြုသည့် လုပ်ငန်းရှင် သုံးဦးကို တရားစွဲမည်